၁, ၂, ၃, ၄, ၅, ၆, ၇, ၈
၁ Feminism and Folklore 2022
၂ Ukraine's Cultural Diplomacy Month: We are back in 2022!
၃ Wiki Loves Folklore is extended till 15th March
၄ Coming soon
၄.၁ Several improvements around templates
၅ Wiki Loves Folklore 2022 ends tomorrow
၆ Feminism and Folklore 2022 ends soon
၇ New Wikipedia Library Collections Available Now - April 2022
၈ Coming soon: Improvements for templates
Feminism and Folklore 2022[ပြင်ဆင်ရန်]
Tiven2240 -- ၀၅:၄၉၊ ၁၁ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Ukraine's Cultural Diplomacy Month: We are back in 2022![ပြင်ဆင်ရန်]
We invite you to take part and help us improve the coverage of Ukrainian culture on Wikipedia!--ValentynNefedov (WMUA) (ဆွေးနွေး) ၁၂:၅၆၊ ၂၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Wiki Loves Folklore is extended till 15th March[ပြင်ဆင်ရန်]
MediaWiki message delivery (ဆွေးနွေး) ၀၄:၅၀၊ ၂၂ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Several improvements around templates[ပြင်ဆင်ရန်]
- Johanna Strodt (WMDE) ၁၂:၃၈၊ ၂၈ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Wiki Loves Folklore 2022 ends tomorrow[ပြင်ဆင်ရန်]
Thanks Wiki Loves Folklore international Team MediaWiki message delivery (ဆွေးနွေး) ၁၄:၄၀၊ ၁၄ မတ် ၂၀၂၂ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Feminism and Folklore 2022 ends soon[ပြင်ဆင်ရန်]
Thanks Wiki Loves Folklore international Team MediaWiki message delivery (ဆွေးနွေး) ၁၄:၂၉၊ ၂၆ မတ် ၂၀၂၂ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
New Wikipedia Library Collections Available Now - April 2022[ပြင်ဆင်ရန်]
--The Wikipedia Library Team ၁၃:၁၇၊ ၂၆ ဧပြီ ၂၀၂၂ (UTC)
Coming soon: Improvements for templates[ပြင်ဆင်ရန်]
-- Johanna Strodt (WMDE) ၁၁:၁၄၊ ၂၉ ဧပြီ ၂၀၂၂ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဝီကီပီးဒီးယား:Community_Portal&oldid=742135" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ ဧပြီ ၂၀၂၂၊ ၁၁:၁၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။